Ring Up Tech - iPhone
NAKZ Co., ( Innoflow Apple Authorized Reseller ) နှင့် Genxt ( mCare Apple Authorised Service Provider ) တို့မှ တင်သွင်းသော ဖုန်းများကိုသာ Warranty Card နှင့် တကွ ရောင်းချပါသည်။
iPhone အတွက် Warranty ရရှိနိုင်မှုနှင့် လိုအပ်ချက်များ
iPhone များသည် NAKZ Co., (Innoflow Apple Authorized Reseller) နှင့် Genxt (mCare Apple Authorised Service Provider) တိုမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ တရားဝင်တင်သွင်းသည့် အလုံးများဖြစ်သည်။
Company ကြီးများမှ တရားဝင်တင်သွင်းထားသောကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ Warranty Card အားကိုင်ဆောင်၍ ထို Company များ၏ Service Center များထံသို့ Customer ကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက် လွယ်ကူစွာတောင်းခံနိုင်သည်။
Region များအပေါ်မူတည်၍ အချို့သော Region များကိုလည်း QCD Technology Myanmar (Apple Authorized Service Center) တွင်လည်း တောင်းခံနိုင်သည်။
Warranty တောင်းခံရာတွင် Customer အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ Warranty Card ကိုပါတစ်ပါတည်း ယူဆောင်သွားရန်လိုအပ်ပါသည်။ Warranty ကုန်ဆုံးမည့်ရက်သည် https://checkcoverage.apple.com တွင် ဖော်ပြထားချက်အတိုင်းသာ အတည်ဖြစ်သည်။
iPhone Dual Sim ကဲ့သို့သော HongKong Stock များအတွက် NAKZ Co., ၏ Warranty Card အားကိုင်ဆောင်၍ Apple Warranty အား iSure မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည်တောင်းခံနိုင်သည်။ Warranty Card ကိုင်ဆောင်ထားခြင်းဖြင့် ပို့ခ ကုန်ကျစရိတ်ပေးစရာမလိုပါ။
မှတ်ချက်။ ။ သက်ဆိုင်ရာ Device. များအတွက်သာ Warranty ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ဗူးအတွင်းပါဝင်သော Adapter, Cable, Earbuds များစသည်တို့အတွက် Warranty မရရှိနိုင်ပါ။ Activate လုပ်ပြီးမှ ဖြစ်ပေါ်သော ကိစ္စအရပ်ရပ်အတွက် Apple Warranty Policy ဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ Dual Sim (Hongkong) ပေါ်ကာစ နှစ်ဦးကာလ အလုံးများအတွက် NAKZ Co., မှ Warranty Card ထောက်ပံ့ထားခြင်းမရှိပါ။ Warranty Card မပါသော အလုံးများအတွက် Warranty မရရှိနိုင်ပါ။ Warranty Card ပျောက်ဆုံး ပျက်စီးမှုများအတွက် Ring Up အနေဖြင့် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
Copyright © 2019 Ring uP. All Rights Reserved